10 akanakisa asina waya mahedhifoni kune yako android, iphone, uye mamwe mabluetooth zvigadzirwa
Kuru Nhau & Ongororo 10 akanakisa asina waya mahedhifoni kune yako Android, iPhone, uye mamwe maBluetooth michina
10 akanakisa asina waya mahedhifoni kune yako Android, iPhone, uye mamwe maBluetooth michina
Imwe neumwe, nhasi & apos; s ekumusoro-magumo mafoni ari kutendeukira kune echokwadi audiophile zvishandiso zvine yakajeka DAC uye gudzazwi setups. Kunyangwe iwe usinga teerere kumimhanzi zvakanyanya, kuwana Xiaomi Mi Cherechedzo, Oppo R5, Vivo X5 Max, kana Galaxy Note 4 / Edge smartphone zvinoreva kutenga tikiti kune iyo nyika yechipikirwa yepamusoro-resolution odhiyo! Uye kunyangwe iwe usiri & apos; kupinda muna 192KHz odhiyo, mazhinji emazuva ano mafoni emafoni anoita basa rakakura achitamba asina kurasikirwa maFLAC mafaera, saka usape & apos; usanyanyo kubatanidzwa muiyo uber yepamusoro-resolution hype.
Zvisinei, izvo iwe & apos; uchazoda kunakidzwa nepristine yemhando yepamusoro mimhanzi yemhando yepamusoro mafaera kutanga, uye peya yemhando isina waya kana waya mahedhifoni gare gare. Isu & apos; tiri kuenda neasina waya nhasi. Nei isina waya? Nekuti zvese zviri nani kana pasina mawaya ari kupinda munzira! Zvakanaka, iyo imwe nzira yekuitarisa. Imwe ndeyekuti iwo mafaera-res FLAC mafaera pane yako smartphone haatorerwe kumusoro wemusoro nemhando yepamusoro inogoneka nekuda kwekukanganisa kweBluetooth & apos.
Zvakangodaro, iwe unowana imwe inotyisa odhiyo inoenderera, saka gadzirira isina waya mahedhifoni ekutenga kurapa! Isu & maapos; takakomberedza gumi pamusoro pemamodeli enzeve nemitengo inotangira pamadhora makumi manomwe (yakaderera pane iyo, iwe & apos; ungangowana dud) uye uchisvika $ 299 - chete kune vanofarira vechokwadi! Zvino, hatina & apos; hatina zviwanikwa zvekuisa vaviri vaviri kuburikidza nemhando yekuyedza kwakasimba kwatinoita nemafoni uye mapiritsi. Asi isu takaita ongororo yedu uye tikabvisa akawanda anodhura asina mahedhifoni mahedhifoni anogona kuverengerwa zvakanyanya, asi zvozove zvine shoddy yekuvaka mhando, yepakati kurira, kana isingakoshe kune zvishandiso zvavanosangana nazvo. Vaviri vaviri vanofanirwa kubatika zvakavimbika kune ako nhare mbozha - ingave iri Android, iOS, Windows kana chero - pamwe neimba yemitambo kana hi-fi system.
Tinogona kutarisa mumakutu enzeve uye pane-nzeve modhi munguva inotevera. Kusvikira panguva iyoyo, nakidzwa nesarudzo yedu uye tenga smart!
Android zuva rekuchengetedza nguva bug 2017
yakanakisa nyaya inotyairwa mitambo ye android mahara
Verizon & apos; s pre-Nhema Chishanu dhizaini kushamisika kwakanaka kwevatambi